Saturday January 18, 2020 - 10:21:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qaar kamida saraakiisha ciidamada ilaalada ka haya xarunta madaxtooyada Villa Somalia ayaa fal naxdin leh ka geystey gudaha magaalada Muqdisho.
Saraakiisha sida gaarka ah u ilaalisa madaxweyne Farmaajo ayaa qafaashay gabar yar oo qurbaha laga keenay kadibna ehelka gabadha ugu hanjabay in ay kufsan doonaan haddii aan lasiin lacago madax furasho kumanaan kun dollar ah.
Amran Xalane oo ah hooyada dhashay gabadha yar ee saraakiisha madaxtooyada qafaasheen ayaa shir jaraa'id oo ay Muqdisho ku qabtay ku sheegtay in gabadheeda laga qafaashay madaraso Qur'aanka lagu barto kadibna lageeyay madaxtooyada halkaas oo lagu heysto.
Hooyadan ayaa ka sheekaysay dhacdo xanuun badan oo qof walba oo Soomaali ah qiira gelinaysa, waxay caddaysay in saraakiisha madaxtooyada ay qirteen in ay gabadheeda qafaal ku haystaan balse ay diideen in ay soo daayaan, sidoo kale waxay carrabaawday in madaxda CID-da ay damiin kusii daayeen dumar ku lug lahaa qafaalka.
Arrintan ayaa ah qeyb yar oo kamid ah xadgudubyada faraha badan ee shacabka Muqdisho ay kala kulmayaan dowladda Federaalka iyo shisheeyaha la shaqeeya waxaana magaalada ka jira kufrsi,qafaal iyo boob ka dhan ah carruurta iyo dumarka soo koraya.
Hoos Ka Daawo Hooyada dhashay gabadha qafaalan oo warbaahinta lahadashay
Isha Muuqaalka: Dalsan TV
Daawo Video: Beesha Leelkase oo maamulka Puntland ku eedaysay in uu Xasuuq ka geystay Gaalkacyo.